Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Page 7 of 7 - Kani waa boga shabakada internetka ee aad ka fahmi Injiilka iyo dhamaan khayrkii aay ku hadleen nebiyadu.
Maqaalkii hore waxaan ku eegnay Calaamadihii Aadan iyo Xaawo. Waxay lahaayeen laba wiil oo si xoog badan iskaga hor yimid. Waa sheekadii dilkii ugu horeysay… Read More »Calaamadaha Qaabiil & Haabiil
Aadan iyo xaaskiisa Xawa waxay ahayeen dad caajiba waayo si toos ah uyuu vIlaahay u abuuray iyaha kuna noolaayeen Janno Firdoosa. ‘ Aadan ‘ micnaheedu… Read More »Calaamada Aadan
Marka aan Quraanka Karimka ah akhriyo wax yaabo badan ayaa qalbigayga taabata. Ugu horeyntii waxa jiray qoraal cad oo ka warbixinyaa Kitaabka Injiilka. Laakiin waxa… Read More »Hordhac: Qaabka Kitaabka Quraanka ah uga hadlaayo ‘ Injiilka’ isaga oo ku tilmaamaya inu yahay Ijiilku Mucjiso xaga Ilaahay (Swt) ka timid.